UKendrick Lamar, u-Lorde kunye neNgoma eNtsha yeeNgoma eCoachella - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Lorde, Drake, Kendrick Lamar kunye neNgoma eNtsha yeeNgoma eCoachella
Lorde, Drake, Kendrick Lamar kunye neNgoma eNtsha yeeNgoma eCoachella
INkosi yenza eCoachella.I-VALERIE MACON / AFP / imifanekiso kaFetty
I-Coachella ikhokelela ekubulaweni kweminyhadala yomculo wasehlotyeni ebalekela abaphulaphuli abakhulu nabakhulu ngonyaka. Uninzi lwamabali eendaba aphicothiweyo aphume kwintlango yase-Southern California kule mpelaveki isusela kwi Isela elibi kakhulu lehlabathi ukuya Thumela i-odolo enkulu yosuku .
UHans Zimmer unike intsebenzo eyindumasi (a Ndiqikelele !). Kwaye okuninzi kokutsha kwaye akukaze kuva umculo ophilayo uphume kwimpelaveki yokuqala.
Nantsi into uKendrick Lamar kunye nabahlobo abaza nayo etafileni ngokomculo omtsha kunye nokubonakala kweendwendwe.
UKendrick udlale uninzi lwe DEMETHI .
DEMETHI. yakhutshwa ngolwesiHlanu ukuya udumo olukhulu . NgeCawa, uLamar wadlala i-8 ye-14 kwimizila ephefumlelweyo apho athatha khona moniker ka-Kung-Fu Kenny. Wonke umrepha omkhulu uhamba ngabo NdinguThixo isigaba (jonga ukuba onke amhlophe), kodwa uLamar ubonakala eyisa ngobabalo nozuko. (Mhlawumbi kungenxa yokuba-kwaye undive apha phandle-yena ngu NguThixo.)
ILady Gaga iqale ingoma entsha kraca
Nangona UJoanne Ulahle iinyanga nje ezidlulileyo, uLady Gaga wazisa ubushushu ngomntu omtsha.
Kuyamangalisa ukuba kukhuthazwe i-90's pop, eyi-nostalgic egqithisileyo yemillennials, ke loo nto sele ikwincwadi yam. Ngendlela eya kwenziwa nguLady Gaga kuphela, wenza ukuba isihlwele siwangawangise emoyeni ngelixesha le chorus yesibini yayijikeleza.
Ixesha elizayo liziswe kuDrake kunye neMigos
Umdlalo we-rap ngumzamo wokusebenzisana. Ikamva liyakholelwa kwaye lazisa iindwendwe ezimbini eziphambeneyo ngoMgqibelo. Kwakukho owayesakuba yintloko yentloko kaCahelhella uDrake, oqhubeka esenza iJumpman kunye neendinyana ezimbalwa ezivela Ngakumbi uBomi . Ukubetha uDrake ngokubaluleka yayinguMigos. I-duo ye-hip-hop inyuke kunye noKamva ukuya kwenza u-Bad kunye noBoujee.
U-Lorde wenza iingoma ezininzi ukusuka IMelodrama
Iseti yeCoachella yeNkosi yayisendle. Nokuba ulwandle lwaluyimbonakalo encinci eyimfihlo ayidlalileyo kusuku olungaphambili.
Kuzo zombini ezi ndawo uye wabonisa iingoma ezimbalwa ezizayo IMelodrama . I-Homemade Dynamite imiselwe ukuba ibeyodwa kwi-albhamu elandelayo. Uqinisekile ukuba wenze okusesikweni kolu fakelo lobudenge ngexesha lengoma onokuyibona kwividiyo engentla.
I-Lauryn Hill yaphazamisa iseti ye-DJ Snake
Ewe, ibingaphantsi kwengozi kunye nesimemo esamkelweyo. Ngayiphi na indlela, imvumi ye-R & B uLauryn Hill weza eqongeni ukuba enze iididies ezimbalwa ezizezakhe ngokuzonwabisa. Ukulungele okanye akunjalo, Abalahlekileyo, kunye nokuBulala mna ngokuthambileyo bonke benza iseti emfutshane kwenye yezona zinto zibalaseleyo emthendelekweni.
UTove Lo wangqina ukuba uMzabalazo uyinyani
Umculi wePopu uTove Lo wenza enye into entsha eCoachella. Ibizwa ngokuba ngumzabalazo kwaye ikwimithambo efanayo nezinye izinto ezikwi-albhamu yakhe ka-2016 ILady Wood . Kukho amarhe okuba kuya kubakho icandelo lesibini kwialbham eza kungekudala, ke ukufana kuyaxhasa le ithiyori.
I-DREAMCAR yenza irekhodi labo lokuqala
Iqela leqela le-AFI / elingenantandabuzo beliqhuba kunye iiveki ezimbalwa. Baye bazisa oku kufutshane kodwa kumnandi kuCahelhella equlethe konke igama lokuqala elinesihloko , ebekelwe uMeyi. Abathandi beza apha ngesikhephe esinezixhobo ezitsha kunye nesembozo sikaDavid Bowie's Moonage Daydream.
UMartin Garrix ulahle i-ID entsha
Yiloo nto abathi iingoma kwi-EDM zithetha. Yindlela entsha ehamba kunye nomdibanisi rhoqo ongumFrentshi uDJ / uMvelisi uFlorian Picasso. Basika kunye ividiyo yomculo kwimifanekiso eCoachella kwaye kujongeka ngathi wonke umntu obandakanyekayo ubenexesha lokuzonwabisa.
UGuillermo del Toro Uthetha ‘ngeeTrollhunters’: ‘Elona Buchule liBalaseleyo lokuDala endakha ndanalo’
Ukuhanjiswa kweentsuku ezimbini eAmazon kukhubaza okusingqongileyo. Olu qaliso lufuna ukuLungisa.
Masingazenzi Umsebenzi kaKathy Griffin Uya kusinda xa ebambe iNtloko ka-Obama
U-alfred stieglitz, u-steerage, ngo-1907
Ioyile ye-cbd iyathengiswa kwi-intanethi
ophethe i-rick kunye ne-morty
umdlalo wetrone ramsay intombi
Iindleko zokuziphindezela kwimfazwe engapheliyo